Assistant Manager/Officer (Admin) (နေပြည်တော်ရုံး) | Myanmar Distribution Group Co., Ltd.(MDG)
Assistant Manager/Officer (Admin) (နေပြည်တော်ရုံး)
- ရုံးခွဲတစ်ခု၏ ၀န်ထမ်းသစ်ရှာဖွေခြင်း ၊ ခန့်ထားခြင်း ၊ ၀န်ထမ်းနှုတ်ထွက်ခြင်း ၊ စည်းကမ်းပိုင်းလိုက်နာမှု စသည့်ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့်ပက်သက်သည့်ကိစ္စရပ်များကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။
- ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စများ ၊ ကုန်ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းခြင်း စသည့်ကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း ၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပက်သက်သည့် ဆီအသုံးစားရိတ် ၊ လမ်းကြောင်းစစ်ဆေးခြင်း ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စများအားတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။
- အရောင်းပြည့်မှီရန်အတွက် ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုအားလုံးကို ရုံးခွဲတာဝန်ခံနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
- Weekly, Monthly Report အားရန်ကုန်ရုံးချုပ် GM သို့ပေးပို့ရမည်။
- တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှဘွဲ့ ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
- အသက် (၂၅ - ၃၅) နှစ်အတွင်းရှိသူဖြစ်ရမည်။
- ရုံးခွဲတစ်ခုတွင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အုပ်ချုပ်မှု၊ ငွေကြေး၊ ကုန်ပစ္စည်း၊ ၀န်ထမ်းရေးရာများတွင် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၃) နှစ်ရှိရမည်။
- Computer ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည် (Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint. Internet, Email, etc.,)
- ဒေသအတွင်းနေထိုင်သူများ၊ နေပြည်တော်ရုံးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူများသာ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Do you have related experiences?
Do you live in Naypyidaw?
Assistant Manager/Officer (Admin) (မုံရွာရုံး) Myanmar Distribution Group Co., Ltd.(MDG) Assistant Manager/Officer (Admin)(မြစ်ကြီးနားရုံး) Myanmar Distribution Group Co., Ltd.(MDG) Assistant Manager/Officer (Admin) (လားရှိုးရုံး) Myanmar Distribution Group Co., Ltd.(MDG) Assistant Manager/Officer (Admin) (မကွေးရုံး) Myanmar Distribution Group Co., Ltd.(MDG) Assistant Manager/Officer (Admin)(မော်လမြိုင်ရုံး) Myanmar Distribution Group Co., Ltd.(MDG) Assistant Manager/Officer (Admin) (ပြည်ရုံး) Myanmar Distribution Group Co., Ltd.(MDG) Assistant Manager/Officer (Admin) (ပုသိမ်ရုံး) Myanmar Distribution Group Co., Ltd.(MDG) Assistant Admin Manager In Thilawa (Female Only) Dream Job Myanmar Limited Assistant Manager - Administration ananda Sales & Marketing Assistant Manager Taung Paw Thar Assistant Manager(Finance) Taung Paw Thar Assistant General Manager(Agronomist Distribution) UMG Myanmar Assistant Project Sales Manager Melbourne Co.,Ltd Assistant Customer Relationship Manager Naing Group Construction Co.,Ltd Assistant Sales Manager AGB Communication Co. Ltd Assistant Logistics Manager (URGENT) Summit SPA Motors Ltd. Brand Assistant Manager The Keier Group Co. Ltd. Assistant HR Manager Ammon Consulting (Myanmar) Co., Ltd Planning & Logistics Assistant Manager Super Coffeemix Ltd Assistant Sales Manager - Male Only National Energy Group Company (NGEC) Assistant Manager -Human Resource Myanmar Net